धनवान बनाउने यी सपना, तपाईंले देख्नु भयो कि ? जानी राखौ «
धनवान बनाउने यी सपना, तपाईंले देख्नु भयो कि ? जानी राखौ
Published : 23 April, 2020 9:54 am
हरेक ब्यक्तिले निदाएको बेला सपना देख्ने गर्दछन् । धार्मीक मान्यता अनुसार हर सपनाको केहि न केहि अर्थ रहने गर्दछ । यस प्रकारका सपनाले ब्यक्तिको जीवनमा घट्ने घटनाको अग्रीम जानकारी गराउने मान्यता छ । यस्ता सपनामा देखियो बस्तु वा स्थानले मानिसमा सकारात्मक वा नकारात्मक दुबै प्रकारका असर पार्ने गर्दछ । कतिपय सपनाले मानिसमा धनलाभको समेत संकेत गर्दछ । कुन कुन सपनाले मानिसलाई धनवान् बनाउने संकते गर्छ त ?
यदि सपनामा कसैले बिरालो, उल्लु र घोडा देख्यो भने ती ब्यक्ति उपर माता लक्ष्मीको कृपा बर्सिने मान्यता छ । यदि सपनामा आफुले घोडसवारी गरेको देखियो भने आगामी भाग लिएको प्रतियोगितामा सफलता पाउने मान्यता छ । सपनामा घोडा चढेको देखेमा रोकिएको पैसा छिट्टै फिर्ता हुने मान्यता रहेको छ । सपनामा माता लक्ष्मी वा भवानीको दर्शन गरेको देखेमा छिट्टै धनवर्षा हुने मान्यता छ । यदि सपनामा कसैले आभूषण धारण गरेको वा खरीद गरेको देखे भविष्यमा अधिक धनवान हुने संकेत गर्दछ ।
यदि सपनामा कमलको फूल धारण गरेको देखे या अरुले फुल भेट गरेको देखे थालेको काममा अपार सफलता प्राप्त हुनेछ । यदि सपनामा साना उमेरमा बालिका देखे देवीशक्तिको विशेष कृपा हुनेछ । कसैले सपनामा मन्दिरको दर्शन गरेको देखे त्यो अत्यन्त शुभ मानिन्छ । यदि सपनामा मन्दिर देखेमा आउने समय निकै शुभ हुनेछ भन्ने संकेत मानिन्छ । सपनामा कुलदेवताको दर्शन गरेको देखेमा जीवनमा विद्यमान सबै कष्ट, संकट नाश भएर जाने मान्यता छ ।